Yepamusoro mhando uye kugutsikana kwevatengi ndizvo zvatinovavarira .Welcome kune wese mutengi pamwe
Shandong Yanggu Constant Crystal Optics, Inc.hwakagadzwa munaEpril 2006, iri muXiangguang kusimudzira kwehupfumi, Yanggu County, Shandong Province. Isu takasarudzika mukutsvagisa, kugadzira uye kutengesa optics uye zvigadzirwa zvemaziso.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira Optical windows, prism, lens, beamsplitter, Sefa, wedge, blanks uye nezvimwewo. , CDGM, SCHOTT, HOYA, OHARA, nezvimwe.
Isu tinonyanya kugadzira sevhisi yakasarudzika zvinoenderana nezvikumbiro zvevatengi uye kudhirowa s, uye isu zvakare tine mamwe akajairwa mafirita mafirita, windows, prism muchitoro, anogona kukutumira iwo masampuli ebvunzo.
Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kushandiswa mumakamera, zviridzwa zvemagetsi, zviridzwa zvekurapa, zviridzwa zvekudzidzisa, purojekiti chengetedzo uye nezvimwe.
Kwemakore gumi apfuura, takatora chikamu muLASER World yePhOTONICS muMunich Germany, OPTATEC muFrankfurt Germany, SPIE Photonics West muSan Francisco, CA USA nezvimwewo, unogona kuuya kuzoshanyira dumba rekambani yedu .Uye nekukurumidza kubazi Kushambadzira Kwepasi Pose, vatengi vakakurumbira vakagoverwa kuGerman, Russia, Italy, South Korea, United Kingdom, United States, etc. Takatangisawo hushamwari hwekudyidzana kwenguva refu nemakambani mazhinji anozivikanwa.
Kambani yedu inotora hutungamiri hwevanhu, inotarisa pane tarenda uye hunyanzvi hunyanzvi .Tinopa imwezve yekudzidza mukana wevashandi vedu, inovandudza hutano hwevashandi nekushanda enviroment uye inotarisira nezve hupenyu hwevashandi.
Shandong Yanggu Constant Crystal Optics, Inc. IS AN ISO9001: 2015 CERTIFIED COMPANY:
Shandong Yanggu Constant Crystal Optics, Inc.is alibaba Goridhe pamwe nokutengesa:
Shandong Yanggu Constant Crystal Optics, Inc. Kuongorora kwekambani:
Shandong Yanggu Constant Crystal Optics, Inc.Production chinzvimbo:
Shandong Yanggu Constant Crystal Optics, Inc.Quality vimbiso: